हामी तपाईं र तपाईंको परिवारलाई मिसौरी डब्ल्यूआईसी कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। कृपया हामीलाई कल गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग डायल गरेर केहि प्रश्नहरू छन् भने: 573-751-6204 वा (टोल-फ्री) 800-392-8209। तपाइँ मिसौरी डब्ल्यूआईसी यहाँ ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ - WICinfo@health.mo.gov.
के तपाइँसँग प्रश्नहरू छन् वा प्रयोग गर्दा समस्याहरू छन् WICShopper अनुप्रयोग? ईमेल JPMA मा WICShopper@jpma.com
तपाईं WIC मा नयाँ हुनुहुन्छ? कृपया मिसौरी हेर्नुहोस् WIC मा स्वागत छ भिडियो तल!
मिसौरी WIC भिडियोमा स्वागत छ
सबै WIC एजेन्सीहरू WIC खाद्य सुविधाहरू पुर्‍याउन इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (EBT) को उपयोग गर्न चेक प्रदान गर्नबाट सर्नेछन्। EWT मा संक्रमण, eWIC को रूपमा संदर्भित, एक सजिलो शपिंग अनुभव सिर्जना गर्दछ। WIC परिवारहरूले एक महीनामा एक पटकमा सबै कुराको सट्टा सामानको लागि बहुविध यात्राहरूमा सामानहरू खरीद गर्न सक्षम हुनेछन्।
हामी यस जानकारीलाई eWIC दृष्टिकोणको रूपमा अद्यावधिक गर्दैछौं। अद्यावधिकहरूको लागि यहाँ जाँच गर्नुहोस्!
तपाईंको WIC चेक र WIC ID फोल्डर स्टोरमा तपाईंसँगै ल्याउनुहोस्।
WICShopper अनुप्रयोगमा उत्पादनहरू स्क्यान गर्नुहोस् उनीहरूले मिसुरी WIC- योग्य छन् भनेर निश्चित गर्न। प्रमाणिकरण गर्न नबिर्सनुहोस् तपाईसँग सामान खरिद गर्नु अघि खरिदहरूमा छापिएको थियो।
WICShopper (वा तपाइँको छापिएको संस्करण) मा तपाइँको मिसौरी WIC स्वीकृत फूड सूची (AFL) प्रयोग गर्नुहोस् तपाइँले किन्न सक्नुहुने WIC फूडहरू हेर्नका लागि।
अनुमति - यो आईटमलाई मिसौरी WIC को लागि अनुमति छ! एउटा कुरा जान्नको लागि तपाईले कुनै वस्तुलाई अनुमति दिईएको हुनसक्दछ, तर यो तपाईंको WIC फूड बेनिफिटको अंश होइन, त्यसैले तपाईं यसलाई WIC सँग खरीद गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि, एक बर्षको बच्चा पूरै दुध पाउँछ। यदि तपाईंसँग तपाईंको परिवारमा एक वर्षको बच्चा छैन भने, पूरा दूध तपाईंको WIC खाना बेनिफिटहरूको अंश हुनेछैन, र तपाईं रजिस्टरमा सम्पूर्ण दूध किन्न सक्षम हुनुहुने छैन। WIC लाभहरू WICShopper अनुप्रयोगमा लिंक नभएसम्म, यो "अनुमति दिईएको" सन्देश तपाइँको परिवारका लाभहरूमा लागू हुन सक्दैन।
A: "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"तपाईले WIC लाई बताउनुहुन्छ जब एक खाद्यवस्तु किन्न तपाईं खरीद गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ रेजिस्टरमा अस्वीकार गरिएको छ। जब तपाइँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"WICShopper अनुप्रयोगमा, WIC राज्य एजेन्सी एक सूचना प्राप्त गर्दछ। WIC राज्य एजेन्सी सबमिट गरिएका सबै आईटमहरूको समीक्षा गर्नेछ र स्टोरहरूको साथ काम गर्दछ तपाईंलाई अनुमति दिइने खाद्य पदार्थहरू उपलब्ध गराउन!
करेको इलेक्ट्रोनिक: program.intake@usda.gov।